Mucaaradka Qadaafi diidka ah oo laga saarey Bani Walid+Wararkii u dambeeyey – SBC
Mucaaradka Qadaafi diidka ah oo laga saarey Bani Walid+Wararkii u dambeeyey
Posted by editor on September 17, 2011 Comments
Xoogaga mucaaradka Liibiya ee Qadaafi diidka ah ayaa la sheegay inay kala kulmeen iska caabin xoogan oo lagu qasbay inay dib uga gurtaan magaalada muhiimka ah ee Bani Walid oo ay dagaalo culus ku dhexmareen iyaga iyo xoogaga daacada u ah Col. Muamar Al-Qadaafi.
Xoogaga mucaaradka oo ku jihaysan Sirta
Dagaalyahanada mucaaradka ayaa waxay markii ay gudaha u galeen magaalada Bani Walid oo 140 km Koonfur bari ka xigta caasimada Tribopli la kulmeen duqeyn ba’an & rasaas culus taasi oo keentey inay dib uga gurtaan magaalada.
Sidoo kale dagaalyahanada mucaaradku waxay weeraro adag ku hayaan magaalada Sirta ah oo meeshii uu ku dhashay Col. Qadaafi isla markaana ah mid ka mid ah magaalooyinka ku harey gacan ku heynta ciidamada daacada u ah Col. Qadaafi.
Horin ka tirsan mucaaradka oo Masjid Hurdo & Salaad ugu jira
Xoogaga mucaaradka ayaa markii ay gudhaa u galeen magaalada Bani Walid waxaa ciidamada daacada u ah Col. Qadaafi ay adeegsadeen xirfado dagaal oo ay ka mid tahay toogashada tooska ah, iyagoo sidoo kale madaafiic ku gaaraacay goobihii ay soo galeen.
“Waxaa nalagu armay inaan dib uga soo baxno magaalada, waxaa nalagu duqeeyey madaafiic, laakiin dib ayaan ugu soo laaban donna” ayuu yiri Assad Al-Hamuri oo ka mid ah dagaalyahanka mucaaradka oo ay wareysatey wakaalada wararka Reuters xili ay ka qalab urursanayeen magaalada oo ay dib uga soo baxeen.
Dagaalo kale oo faraha looga gubtey ayaa ka soconaya agaagaraha magaaalda Sirta iyadoo dagaalkaasi lagu tilmaamay in uu yahay kii ugu ba’anaa lagana yaabo in uu noqdo kan lagu kala baxayo.
Laakiin xaalada halista ah ayaa ah dadka rayidka ah kumaanka kun gaaraya ee ku nool magaalooyinka Sirta & Bani Walid, kuwaasi oo la rumaysan yahay inay ku sugan yihiin xaalad adag oo ya ka mid tahay cunto oo gabaabsi ku ah, biyo & koronto la’aan.
Dirirta Bani Walid ayaa imaanaysa iyadoo golaha qaranka KMG Liibiya ee NTC waqtigii uu u qabtey dadka rayidka ah inay isaga baxaan magaaladaasi ay dhamaatey.
Dhinaca kalena afhayeenka Col. Qadaafi Moussa Ibrahim ayaa sheegay in xoogaga mucaaradka Liibiya ay la kulmanaan khasaare ba’an, wuxuuna ku macneeyey dagaalada Bani Walid kuwa ay si xun ugu gubteen, isagoo hadalkan ka sheegay Telefishinka Al-Rai ee fadhiisu yahay wadanka Suuriya.
“Waxaynu isku diyaarinay dagaal waqti dheer socda, waxaynu haysanaa hub & qalab” ayuu yiri Ibrahim.
“Waxaan u sheegeynaa qof kasta oo ku sugan Sirta & Bani Walid in ciidamada furinta ku sugan ay aad u xoogan yihiin, inkastoo ay duqeyn culus oo aan la rumaysan karin ay ka imaanayso NATO, kuwaasi oo duqeynaya Isbitaalada, Iskoolada & Qoysaska” ayuu hadalkiisa kus ii darey Ibraahim oo ay soo xigatey wakaalada wararka ee Reuters.
Xoogaga Col. Qadaafi ka soo horjeeda ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Sirta inkastoo dagaal culus laga soo sheegayo Bariga Koonfureed ee magaalada.
Qaramada midoobay oo kursiga Liibiya siiyey golaha qaranka KMG
Dhinaca kale qaramada midoobay ayaa waxaa la sheegay inay isku raaceen in ay siiyeen kursigii Liibiya xukuumada KMG Liibiya ee ay dhiseen mucaaradka la dagaalamaya Col. Qadaafi.
Golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay oo ay ku jiraan 193 dawladood waxaa u codeeyey kuriga Libiya in la siiyo NTC u codeeyey 114, waxaase ka biyo diidey 17 wadan oo u badan Latin Ameerika waxaa sidoo kale ka aamusay 15 wadan, wadamada Afrikaanka ayaa iyagu soo jeediyey in dib loo dhigo qaraarkaasi.
Sawir muujinaya nacaybka loo qabo Col. Qadaafi
Talaabadan waxaa la sheegay in ay golaha qaranka KMG Liibiya ay la kulmeen mucaaradnimo aan badneyn, waxaana la filayaa in hogaamiyaha golaha qaranka KMG Liibiya Mustafa Abdul Jalil uu ka qayb galo shirka golaha loo dhan yahay ee qaramada Midoobay ee ka dhici doona magaalada New York todobaadka soo socda.
Saraakiisha Mareykanku waxay sheegeen in madaxweynaha Mareykanka Barack Obama in uu Mr Jaliil la kulmi doono inta uu socdo kulankaasi.
Qaramada midoobay waxay kaloo fudadeysay cunaqabateyntii Liibiya lagu soo rogey ee ay ka mid aheyd Saliida & Bangiga qaranka.
Wax jamciyad quruuma kadhaxaysa layiraahdo majirto.waxa jira gole ay cadawga islaamku ku midaysan yihiin.waxa taraxa qaar magac uyaala ah ahna tira buuxis waxaanse ku rajawaynahay inaanay toban sano kabadan kadhinayn awooda islaamka marba haddii meel walba gaala nacayb ka bilaabmay xarakooyinka argagaxisada loo yaqaan ayaa taariikhda wax ka bedeli doona .tusaale turkigii waa soo noqday iiraan waatan lamari la.yahay in kastay habeen gaala kasokayso shumacyadaas ay iskudayayaan inay damiyaan ayaa nalal isu wada bedeli doona man kaana yuriidul cizata falilaah cizato jamiican. Waana kalabax aduunyadu xag dagaal iyo xag towbadeedba waxaa la layaaba niman dhan oo culuma sheeganaya ama dad towxiidka ku dhawaaqaya oo islaam sheeganaya oo laga reebi la.yahay kuwii alaah iyo rasuulkiisu uga digeen marka saacadu waa taagan tahay bal waxa layaaba qof masaajid aadaya tafsiirgelaya kula diin ah kula dhashay oo haddana leh ameerikaan talasaartay dimoqraadiyadaan rabaa ! Fanacuudu bilaahi min xaal ahli naar waxaan layaabaa hooyo iyo aabe ilmahoodii ay intaa kusoo tabcayeen cadaab uga raali noqday ooleh la rid xabadda maraykan xabashi israa iil soomaalidu waxay gaal uyaqaanaan ninki makrafoon qaata dhahana diintaan kabaxay war islaanimadu waa kudhaqan dhaqankaaga hagaaji saaxibkaaga aakhirana waakaaga aduun kafiirso(almar u man axaba yawmalqiyaama)hadaad gaalada ku garabsiiso cadaawada islaamka ama tirtirada islaamka lamid baa tahay hadhaw iyo hadeerba.ama soon ama salaad halbacaad lagulisay war ilmaha hayska haligana malaa xaaraan baad kudhasheen !